Pneumonia patients infected with novel coronavirus cured
Pneumonia patients infected with novel coronavirus cured (1/9)
2020-02-06 09:08:50 Xinhua Editor :Cheng Zizhuo
Cured patients take photos with medical staff at the First Affiliated Hospital of Zhejiang University in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Feb. 5, 2020. Seven pneumonia patients infected with the novel coronavirus were cured and discharged from the hospital on Wednesday. (Xinhua/Xu Yu)
Cured patients walk out of the First Affiliated Hospital of Zhejiang University with medical staff in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Feb. 5, 2020. Seven pneumonia patients infected with the novel coronavirus were cured and discharged from the hospital on Wednesday. (Xinhua/Xu Yu)
Cured patients walk out of the No.4 People's Hospital in Xining, northwest China's Qinghai Province, Feb. 5, 2020. Three pneumonia patients infected with the novel coronavirus were cured and discharged from the hospital on Wednesday. (Photo by Zhang Haidong/Xinhua)
Cured patients pose for a group photo with medical staff at the No.4 People's Hospital in Xining, northwest China's Qinghai Province, Feb. 5, 2020. Three pneumonia patients infected with the novel coronavirus were cured and discharged from the hospital on Wednesday. (Photo by Zhang Haidong/Xinhua)
Cured patients wave at the No.4 People's Hospital in Xining, northwest China's Qinghai Province, Feb. 5, 2020. Three pneumonia patients infected with the novel coronavirus were cured and discharged from the hospital on Wednesday. (Photo by Zhang Haidong/Xinhua)
I'm not a virus: Chinese man gets hugs in Florence